NAB နယူးယောက်တွင်စကားပြောရိုးရှင်းမှုနှင့် (၎င်းသည်“ ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောအချက်”) နှင့်ကွဲပြားသောအရာ။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Multi-Channel XAVC နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန် Metus နှင့် Matrox Video Team မှ
PBS39 / WLVT-TV သည်အဆင့် ၃ တိုးချဲ့မှုအတွက် PlayBox Neo ကိုရွေးချယ်သည်
Media Links သည် Virtual NAB NY 100 ၌ 2020G IP Eco-System ကိုပြသသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NAB နယူးယောက်တွင်စကားပြောရန်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် (၎င်းသည်“ ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောအချက်”) နှင့်ကွဲပြားသောအရာ
NAB နယူးယောက်တွင်စကားပြောရန်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် (၎င်းသည်“ ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောအချက်”) နှင့်ကွဲပြားသောအရာ
နယူးယောက်ကြော်ငြာအေဂျင်စီကိုတည်ထောင်သူများသည်ကြော်ငြာဆက်သွယ်ရေးနှင့် Hewlett Packard လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြောင်းလဲနေသောအေဂျင်စီများ၏မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။
New York City - ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခု၏ဖန်တီးမှုအကြီးအကဲ Tommy Henvey နှင့် Managing Partner Patti McConnell သည်ရိုးရှင်းမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာကိုဖန်တီးရန်ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းသစ်ကိုရှာဖွေသည့်အထူးအဖွဲ့တွင်ဆွေးနွေးမည်။ NAB ပြရန် နယူးယောက်။ Henvey နှင့် McConnell သည် Adweek Creative and Innovation Editor မှ David Griner မှခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော“ ယင်းသည်ပျော်စရာဖြစ်ရန်ကြံစည်ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်“ ဆက်သွယ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်တီထွင်မှုမဟာဗျူဟာ၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Claire Avery နှင့် Hewlett Packard လုပ်ငန်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရာရှိ Marissa Freeman တို့နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ session ကိုအောက်တိုဘာလ 17 မှာကြာသပတေးနေ့,2မှာ 15 pm မှာစီစဉ်ထားသည် Javits စင်တာ (အဆင့် 2) ။
ဒီဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ရန်လိုသောသူတို့အဘို့မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ code ကို EP06 ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အခမဲ့ဒီတော့ပြုစေခြင်းငှါ Show ကိုနယူးယောက် NAB.
ကြီးမြတ်အလုပ်ကိစ္စ။ သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်ရရှိသောရလဒ်သည်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာခင်ဗျားအဲဒီကိုရောက်တာနဲ့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။ ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုသည် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောအေဂျင်စီများ၏မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာတိုပေးပို့ရေးအတွက်သာမဟုတ်ဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင်အေဂျင်စီကိုတည်ထောင်သူများကလူများနှင့်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များကအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုစကားပြောဆိုရန်အတွက်အေဂျင်စီတည်ထောင်သူများနှင့် Charter Communication နှင့် Hewlett Packard Enterprise တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပူးပေါင်းလိမ့်မည်။ လူတိုင်းကလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုသူတို့ကထိုးထွင်းသိမြင်စေလိမ့်မည်။ လူတိုင်းကသူတို့လုပ်နေတာကို ၀ မ်းသာသည်၊
Tommy Henvey McGarry Bowen တွင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီး Y&R ရှိ Group Creative Director နှင့် BBDO ရှိ Creative Director ဖြစ်သူ Ogilvy တွင်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့သည်။ သူသည် FedEx၊ Doritos, Mt. Dew, Pepsi, Lincoln, Verizon, Century 21, Citizens Bank, Thomson Reuters, Kool Aid, NASCAR နှင့် Time Warner Cable တို့ကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်။ သူသည် AICP, ANDY၊ Cannes Film Festival, Clio, Effie, Emmy, New York Festival နှင့် One Show ဆုများရရှိခဲ့ပြီးအလှဆင်ထားသောဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူဟာသူလုပ်တာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာရန်ကီးတွေအတွက်ခေတ္တရပ်နားနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကနေ့စဉ်လျော့နည်းသွားတယ်။
Patti McConnell ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့် Ogilvy & Mather သို့သွားသောခရီးစဉ်များပါ ၀ င်သည်။ သူမသည်ထုတ်လုပ်မှု NA ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အမေရိကန် Express၊ Coca-Cola, Kraft Foods နှင့် Time Warner Cable အတွက်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Patti သည် BBDO နှင့် JWT နှစ်ခုစလုံးတွင် EP ရာထူးများရရှိထားသည်။ သူမအလုပ်ကို AICP, ANDYs, Cannes Film Festival, Clios, Effies, Emmys, New York Festival နှင့် One Show ဆုများတွင်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
Claire Avery အလွန်အောင်မြင်သောစျေးကွက်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်သည်။ သူမသည် 2007 ရှိ Charter Communication တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Mark နှင့် Cable Faxie ဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ပCharterိညာဉ်စာတမ်းမတိုင်မီကသူသည် AOL ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူမသည် Sweet Briar ကောလိပ်မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။
Marissa Freeman Interbrand ၏အကောင်းဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များ၌အချိန်ကုန်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသော HPE ကော်ပိုရေးရှင်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ သူသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကြော်ငြာ၊ မီဒီယာ၊ အကြောင်းအရာမိတ်ဖက်များ၊ HPE မတိုင်မီက Freeman သည် BBDO, DDB နှင့် Deutsch LA တို့တွင်အုပ်ချုပ်ရေးရာထူးများရခဲ့သည်။ Deutsch LA ရှိ DIRECTV တွင်သူမအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကသူမအား Time Warner Cable သို့ SVP အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူမသည် AMA Marketer ၏တစ်နှစ်တာဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးမကြာသေးမီက Brand Marketing မှထိပ်တန်း 100 အမျိုးသမီးများစာရင်းတွင်နာမည်ရခဲ့သည်။ သူသည် Montclair ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာစီးပွားရေးကျောင်းနှင့်နယူးယောက်တက္ကသိုလ်တို့တွင်သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။
David Griner 12 နှစ်များအတွက် Adweek အတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များ၊ ပေါ်ထွက်လာသောနည်းပညာများ၊ အေဂျင်စီများနှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူကြီးကြပ်သည်။ သူကလူကြိုက်များတဲ့ဖန်တီးသူပါ #AdweekChat ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတွစ်တာတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး Folio Awards မှ 2018 ၏အကောင်းဆုံး Podcast တစ်ခုဖြစ်သည့် Adweek ၏ Podcasts“ Yeah, ဒါဟာဖြစ်နိုင်သည်ကကြော်ငြာတစ်ခု” ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ 2018 တွင်သူသည်တစ်နှစ်တာဂျာနယ်လစ်အဖြစ်ယူကေအခြေစိုက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Women in Marketing ။
ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဘရွတ်ကလင်း, New York မှာတည်ရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 929-324-3030 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.itssomethingdifferent.com
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ကြော်ငြာ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 နယူးယောက် NAB NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-10-09
ယခင်: CCTV သည် Dragon Boat ပြိုင်ပွဲတွင် Lectrosonics Digital Hybrid Wireless ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Eran Stern